Mushroom with Water Spanish and Pound Fish Spicy Stir-Fried (မှိုကန်ဇွန်း နှင့် ငါးဖယ် အစပ်ကြော်)
ငါးဖယ် ၅ ကျပ်သား
Pound Fish 80 g
ကန်စွန်း ၁ စီး (၄ လက်မလောက်ဖြတ်ထားပါ)
Water Spanish 1 Bunch (cut4inches long)
မိူ ၂ ကျပ်ခွဲသား (၄ စိတ်စိတ်ထားပါ)
Mushroom 40 g (cut quarter)
ကြက်သွန်ဖြူ ၃ တက်( တစ်ပြားရိုက်ထားပါ)
Garlic3cloves (crush)
ငရုတ်သီးစိမ်း ၅ တောင့် (ထက်ခြမ်း ခြမ်းထားပါ)
Fresh chili5no (cut in half)
သံလွင်ဆီ ၁ ဇွန်း စားပွဲ ဇွန်း
Turmeric powder dash
ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး ၇ လုံး (ထက်ခြမ်းခြမ်း)
Cherry tomato7no (cut halft)
Hua Jiaoafew
ချင်း ၁ ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
၁။ ငရုတ်ဆုံထဲ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်း၊ မက်ခါသီး များ ညက်အောင် ထည့်ထောင်းပါ။
1.In Mortar and pestle pound garlic, ginger and hua jiao until crush well.
၂။ ဒယ်အိုးထဲ ဆီထည့်ပြီး အပူပေးပါ။ ဆီပူလာလျင် နနွင်းမှုန့် နှင့် ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူများ ထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ ကြက်သွန် ဖြူ အနံမွှေးပြီး ပျော့လာလျင် ငါးဖယ် များထည့်ပြီး ကြော်ပါ။ အရောင်လှလာလျင် ကန်စွန်းရွက်ကို အရင်ထည့်ပါ။ မွှေပေးပါ ကန်းစွန်း အနည်းငယ်နွမ်းလာလျင် မှိုထည့်ပြီး ကျန်ပါဝင် ပစ္စည်းများ ထည့်ပြီး အသီးအရွက်များ အနည်း ငယ် နွန်း တည့် အထိပဲထားပါ။ မီးဖိုပေါ်မှ မချခင် ဆားမြည်းပါ လိုတာထပ်ဖြည့်နိုင်ပါသည်။
2.Inawok add oil and heat. Add turmeric powder and pound garlic and sauté. When fragrant add pound fish and fried until color right. Add in water Spanish and stir well. When water Spanish welt add mushroom and the rest of ingredients in and cook until all vegetable are soft. Taste before takeoff from the heat and add whatever needed.
Basil chicken with mushroom and bell peppers (ကြက်ပင်စိမ်း၊ မှို၊ ငရုတ်ပွကြော်)
Cleared Minced Chicken Soup
Deep Fried Breads with Prawn and Cucumber (ပုဇွန်ပါမုန့်အကြွပ်ကြော် နှင့် သခွားသီးချဉ်)
Devil Prawn (မိစ္ဆာပုဇွန်)
Fried Flat Rice Noodle with Shrimp & Fish Cake (ဆန်ခေါက်ဆွဲပြားနှင့် ပုစွန်စိပ်၊ ငါးအသားပြားကြော်)
Fruit with Mango Coconut Milk
Green Ministone Soup with Smoked Salmon
Leftover Roasted Beef & Potato Salad with Miso Vinaigrette (အမဲမိုးခိုသားကင် နှင့် အာလူးပြုတ် မီဆိုအချဉ်သုပ်)
Leftover Roasted Beef Salad with Spicy Cilantro Dressing (အမဲသားကင် နှင့် နံနံပင်အစပ်သုပ် )
Mackerel and Apple Spicy Salad (မက်ကရယ်ငါး နှင့် ပန်းသီးစိမ်း အစပ်သုပ်)
Mini Tuna Spring Roll
Multiseed Club Sandwich
Oven Baked Chicken Nuggets with Parmesan and Mozzarella
Poached Egg over Green with Mushroom
Prawn with Tom Yam Paste (ပုဇွန်တုန်ယမ်းအနှစ်ကြော်)
Radish Green with Luncheon Meat Stir-Fry
Salmon Teriyaki with Yoghurt Mayonnaise Salsa (ဆာလ်မွန်ငါး တာရီယာကီ နှင့် ဒိန်ချဉ်မရောနိစ့်သီးရွက်စုံသုပ်)
Saute Egg Tofu & Snow Pea in Oyster Sauce (ကြက်ဥတို့ဟူး နှင့် ရွှေပဲသီးကြော်)
Saute Mango Prawn (ပုဇွန်သရက်သီးမှည့်ချက်)
Smoked Tuna with Mixed Salads
Tomato Roccola Salad
ပါစတာ နှင့် ချိစ်၊ ကြက်အူချောင်း၊ သီးရွက်စုံသုပ်